13:31, 18 दिसम्बर 2018 का अवतरण
→‎नेपालका इतिहास बिद्का लेख
04:08, 18 दिसम्बर 2018 का अवतरण (सम्पादन)
छो (27.34.70.249 (Talk) के संपादनों को हटाकर कत्यूरी राजाका वंशज के आखिरी अवतरण को पूर्ववत किया)
13:31, 18 दिसम्बर 2018 का अवतरण (सम्पादन) (पूर्ववत करें)
(→‎नेपालका इतिहास बिद्का लेख)
==नेपालका इतिहास बिद्का लेख ==
*#जातिय हिन्दूधर्म नमानेका कारण खशहरु जनै लगाउ“दैन्थे । काश्मिरतिर धेरै खशहरु[[खश]]हरु मूसलमान, तिब्बत तिरका र पूर्वी नेपाल तिरका खशहरु बौद्ध र पश्चिमी नेपाल तथा कुमाऊँका खशहरु हिन्दू बाहुल्य बस्ती बीच बसेका कारणबाट हिन्दू धर्मलाई नै बिस्तारै अपनाउन पुगे । मनूले मनुस्मृतिमा खश जाति आर्यहरुबाट पतित क्षत्रिय भनेका छन् । यस जातिलाई ज्यादै तल्ला तहका क्षत्रियमा राखेकाछन् । मार्कण्डेय पुराणमा खशहरु नेपाल र स्वर्णभूमि (तिब्बत) को बीचमा बस्दथे भनिएको छ । वायुपुराण अनुसार खशहरुलाई राजा सगर नष्ट गर्न चाहन्थे तर वशिष्ठ ऋषिको कृपाले यी बचेको बताईन्छ । विष्णुपूराणमा खशजातिका मान्छेलाई यक्ष भनिएको छ । जुन त्यो वेलाका आदित्यका सेवकका रुपमा थिए । यक्ष कन्यालाई कश्यप ऋषिले विवाह गरेका थिए । जुन राक्षसकी आमा थिइन । यक्षहरुका राजा कुवेर थिए । जून कैलाशमा बस्दथे । पछि यक्षका सन्तानलाई खश भनियो । पाण्डवहरुको अश्वमेघ पर्वमा खशहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । खशहरु लडाकु जातिका रुपमा चिनिएका थिए । यसै वंशजका अशोक चल्ल विक्रमको १३ औं शाताब्दीमा भयङ्कर बहादुर शासक थिए । उनको सैन्यसंगठनलाई '''“सर्वगामिनिवाहीनी”''' भनिन्थ्यो भने उनको देशलाई “'''सपादलक्षशिखरिखसदेश'''” भनिन्थ्यो । आर्य जातिसँग ज्यादै नजिकको यो जातिले आप्mनाआफ्ना संस्कार अनुष्ठानमा वेदका मन्त्रको प्रयोग नगर्ने तर श्लोक, स्तोत्रबाट पूजापाठ गर्ने गदर्थे । खशहरु जातिय कट्टरतामा विश्वास गर्दैन थिए तर सामाजिक नियम कानुनको कढारुपमा पालना गर्दथे । युद्धको बेलामा '''मार्नु ,विषहाल्नु, आगो लगाउनु, शत्रुलाई बर्बाद गर्नु''' जस्ता काम गर्दथे ।
*# नेपालका प्रायस जातहरु सबै खश हुन । तिनीहरु हिन्दूधर्मको सम्पर्कमा आउनु अघि शुद्र सरहका मतवाली थिए । हिन्दू परम्परामा आवद्ध हुनु अघि जनै लगाउँदैनथे, धामी धर्म मान्दथे '''बाह् मध्येका कुनै एक मष्टा र नौ भवानी''' लाई पुज्दथे । <ref name= " खगेन्द्र निरौला,"> त्न पुस्तक भण्डार भोटाहिटी काठमाण्डौद्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण २०४८ को नेपाल परिचय, पेज नं ११९ मा रहेको विषय अनुसार </ref>
*# कुलदेवता, '''मष्टो, भवानी, वराह, वन्दी गणका देवी देवता''' पूज्ने सबै खशहुन । आजकाल तागाधारण गर्ने क्षत्रियहरु ठकुरीहरु भारतीय राजपूत भएको दावा गर्दछन् । आजकालका ब्राह्मणहरु कान्यकुञ्ज र गौड देशका सपना देख्छन तर ती सबै खश संस्कृतिबाट पैदा भएका जाति हुन । नेपालका बाइसी चौवीसी राजाहरु र तिनका गुरु पुरोहितहरु पनि सोझै खशसँग सम्बन्धित छन् । <ref name= "नेपालका इतिहास विभाग निर्देशक डा. राजाराम सुवेदी "> नेपालका इतिहास विभाग निर्देशक डा. राजाराम सुवेदी कर्णाली प्रदेशमा मध्यकालीन डोटी राज्यका लेखक तथा का अनुसार </ref>
"https://hi.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/4055156" से लिया गया